बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको इन्गेजमेन्टको औंठीको मूल्य कति ? – Online Kendra
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको इन्गेजमेन्टको औंठीको मूल्य कति ?
२४ कार्तिक २०७८, बुधबार १२:५० pariwartan
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको विवाह कति शानदार तरिकाले भएको थियो। विवाहको पहिरनदेखि औंठीसम्म प्रियंकाले निकै महँगा सामान लगाएकी थिइन् । हालै एक अन्तरवार्तामा उनको इन्गेजमेन्ट गर्दाको औंठीको मूल्य २.१ करोड भारु भएको बताएकी थिइन् ।
अन्तरवार्तामा प्रियंकालाई उनको सबैभन्दा मूल्यवान गहना कुन हो भनेर सोधिएको थियो । प्रश्नमा जवाफ दिने बेलामा उनले हाँस्दै भनेकी थिइन्, ‘यदि मैले मेरो इन्गेजमेन्टको औंठीको नाम लिइनँ भने मेरा श्रीमान् निक जोनसले मलाई मार्नेछन् । हुन त यो औंठीसँग मेरा थुप्रै याद जोडिएका छन्, त्यसैले पनि म यसैको नाम लिन चाहन्छु ।’
रिपोर्टका अनुसार निक जोनसले आफ्ना साथीको मद्दतले प्रियंकाका लागि औंठी लिएका थिए । प्रियंकाले आफ्नो इन्गेजमेन्टको औंठी टिफनीको हुनुपर्छ भनेको निकले सुनेका थिए । योसँग उनको पिताको निकै गहिरो सम्बन्ध पनि भएको निकले बताए । प्रियंकालाई विवाहको प्रस्ताव राख्ने सोच बनाएपछि मैले आफ्नो साथीलाई तत्काल बोलाएँ र टिफनी स्टोरमा गएर उनका लागि औंठी छानेका थिए ।
प्रियंका चोपडा र निक जोनसले सन् २०१८ मा प्रेम विवाह गरेका थिए ।
मनोरन्जनप्रियंका चोपडाको इन्गेजमेन्टको औंठीको मूल्य कति ?
आईसीसी टी-२० विश्वकप : पहिलो सेमिफाइनलमा आज इंग्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्डबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै
कान्तिपथ राजमार्ग: निर्माणले गति लिदै, बाटोको स्थिती कस्तो छ ? (फोटोफिचरसहित)
१४ मंसिर २०७८, मंगलवार १५:४४ Dipika Khadka 0
मंसिर १४, काठमाडौं । मेट्स इन्टरनेशनल नेपाल आइडल सिजन ४ को एजुकेसन तथा भिषा सर्भिसेस पार्टनर...
मनोरन्जन शिक्षा/स्वास्थ्य समाज
२८ कार्तिक २०७८, आईतवार १६:५५ pariwartan 0
सगरमाथा कला पत्रकारिताबाट भण्डारीलाइ सम्मान
कात्तिक, काठमाडौं । शुक्रबार सगरमाथा म्युजिक अवार्डको तेस्रो संस्करण सम्पन्न भएको छ । साहारा एप तेस्रो...
१० कार्तिक २०७८, बुधबार १२:२७ pariwartan 0